सुदूरपश्चिममा यति धेरैलाई राखियो क्वारेन्टाइनमा, कोरोनाकाे जोखिम बढ्दो! (विवरण सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > सुदूरपश्चिममा यति धेरैलाई राखियो क्वारेन्टाइनमा, कोरोनाकाे जोखिम बढ्दो! (विवरण सहित)
admin May 31, 2020 समाचार, स्वास्थ्य 0
सुदूरपश्चिममा लकडाउनको अवधिमा भरात लगायतका क्षेत्रबाट फर्किएका झण्डै ३७ हजारलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कोरोना भाईरसको जोखिममा रहेका ३६ हजार नौँ सय ९३ जनालाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको हो। उनीहरुमध्ये अधिकासं भारतका कोरोना भाईरसको जोखिम भएको क्षेत्रबाट फर्किएका छन्।
स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका अनुसार क्वारेन्टाईनमा राखिएका मध्ये ३२ हजार ६ सय ३८ जना पुरुष र चार हजार तीन सय ५५ जना महिला रहेका छन्। सबैभन्दा बढि कैलालीमा नौँ हजार चार सय ३३ जना, डोटीमा ६ हजार तीन सय २०, कञ्चनपुरमा पाँच हजार पाँच सय ९२ जनालाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको निर्देशनालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ।
यस्तै बैतडीमा चार हजार छ सय २६, डडेल्धुरामा तीन हजार सात सय ४७, अछाममा दुई हजार नौँ सय २०, एक हजार ८ सय ७२, बाजुरामा एक हजार ९ सय ३९ जना र दार्चुलामा आठ सय ४४ जनालाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ। उनीहरु मध्ये अहिलेसम्म झण्डै डेढ हजारको र्‍यापिड टेस्ट भएको छ भने झण्डै दुई सय जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले क्वारेन्टाईन अवधि सकिएपछि अन्यको समेत परीक्षण हुने जानकारी दिए।
चितवन दुर्घटनामा परी नेविसङ्घका नेता अधिकारीको निधन, #RIP लेखेर सेयर गराैं
‘अस्ताइन् सम्झना’ शीर्षक राखेर गलत प्रचार गर्ने को हो ? कारवाही गर्न माग